Nagu Saabsan - Beddelka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ee 'Bedzhou'
Mashiinka mashiinka bada ee loo yaqaan 'Changzhou hechang mashiin co., Ltd. Waxaa la aasaasay 2005, waa soo saare xirfadle ah oo ku saleysan hal abuurka iibka iyo adeegga. Shirkadda waxay ku takhasustay soo-saarka siligga iyo qalabka ka-shaqeynta fiiloyinka, fiilooyinka qalabka xarkaha. Shirkad xirfadleyaal ah, waxay leedahay tiro badan oo xirfadlayaal ah iyo shaqaale farsamo, adeegga iibka xooggan ka dib iyo tikniyoolajiyada saxda ah ee heerka koowaad, alaabada ayaa si ballaaran looga isticmaalay warshadaha elektaroonigga ah, warshadaha gawaarida, warshadaha golaha, warshadaha tamarta iyo warshadaha hawada.
Qalabka mashiinka ee loo yaqaan 'Changzhou hechang mashiin co., Ltd wuxuu alaabada mashiinka ka soo dejiya taiwan iyo japan, sidoo kale waxaa lagu daraa tikniyoolajiyad horumarsan oo ka timaada europe iyo midowga goballada. horumarin!
Alaabadayada ugu waa weyni waxaa ka mid ah mashiinka coaxial coaxial, mashiinka goynta oo si buuxda otomaatig ah looga xirto, taxanaha lacag bixinta, mashiinka goynta tuubbada, mashiinka jariimooyinka mashiinka daminta, taxanaha mashiinka mashiinka, taxanaha mashiinka diirka, mashiinka siligga, mashiinka qaadista mashiinka, mashiinka dambiyada ee naxaasta ah iyo kuwa kale. qalab gaar ah oo silig lagu xirayo qalabyada elektiroonigga ah.
Iskaashi Wada Shaqeyn
qiimaha ugu fiican iyo adeegga ugu dadaalka badan iyo dadaallada aan daallanayn si macaamiisha looga dhigo inay horumariyaan wax soo saarka oo ay la kulmaan baahida macaamiisha.
danaha macaamiisha kuna dadaal inaad hal-abuurnimo sameyso, si aad u abuurto alaabada ugu casrisan adduunka.
Daacadnimo, macaamiil-centric, suuq-ku-saleysan, teknolojiyadda ku saleysan, hubinta tayada.
24ka adeega khadka tooska ah.